Iindaba -Ziziphi izicelo ezahlukeneyo zezinto ezahlukeneyo zePoyinti yePatheni yeAluminiyam Plate？
Zithini izicelo ezahlukeneyo zezinto ezahlukeneyo zePateni yePhatheni yeAluminiyam Plate？
Umsebenzi osisiseko weepaneli zealuminium ezinqatyisiweyo kukuthintela ukutyibilika. Iimeko zethu zesicelo esiqhelekileyo ziibhasi, izinyuko, izinyusi, njl njl., Apho kusetyenziswa iipaneli zealuminium ukuthintela ukutyibilika. Kule mimandla, iimfuno zomsebenzi weepaneli zealuminium aziphezulu, kwaye iiphaneli zealuminiyam eziyi-1060 zinokukhawulelana neemfuno zomsebenzi. Ke nguwuphi umahluko phakathi kokusebenza okungafaniyo kunye nokusetyenziswa kwezinto ezibonakalayo zealuminium? Oku kulandelayo luthotho oluncinci lokwazisa kuwe.
Izixhobo zokukhenkcisa zifuna i-anti-skid, kwezi meko, ukusebenza kwe-anti-rust sisalathiso esiphambili, ukusebenza kwe-aluminium eyi-1060 khange ikwazi ukwenza ifriji ukusebenza ngokuchasene neskid, i-3003 ipleyiti yealuminiyam njengeplate yealuminiyam yokulwa nerusi, skid projekthi kwiindawo ezimanzi. Ukongeza kwipleyiti ye-aluminium engama-3003, i-3A21 aluminium ipleyiti nayo ixhaphake kakhulu, zonke ziloluhlu lwe-3 yealuminium alloy ipleyiti.
5052 Ipateni yealuminium esetyenziswa ikakhulu kulwandle.
Enye yeenzuzo zechungechunge lwe-aluminium ye-5 yechungechunge kukuba inokumelana ngokufanelekileyo nokubola kwe-asidi kunye ne-alkali, ngoko ke i-5052 yohlobo lwe-aluminium iplani yinto ephambili yokulwa ne-skid kwindawo yolwandle. Ewe, kumacwecwe e-aluminium ayi-5, kukwakhona iimveliso ezinje nge-5083, 5754, njl., Ezinokusetyenziselwa ukuvelisa ipleyiti yealuminium.
Zeziphi izinto ezisetyenziselwa iipaneli zealuminium? Kukwakho imeko yesicelo, enje ngeqonga lomsebenzi wasemoyeni, iqondo lobushushu eliphezulu elichasene ne-skid, i-asidi ephezulu kunye ne-alkali corrosion bume, ngenxa yezizathu zokhuseleko, ukusebenza kwepleyiti yealuminium iphezulu kakhulu, 6061 ipateni yealuminium ipleyiti yazalwa. 6061 aluminium ipleyiti yonke imiba yokusebenza intle kakhulu, inokubonelela ngokhuseleko olomeleleyo lwendalo enobungozi obunxamnye ne-skid.
Umxholo ongentla apha zizicelo ezahlukeneyo zezinto ezahlukeneyo zokwenza ipleyiti yealuminium yokuhombisa uKetchum akwazisa yona. Ngenkqubela phambili eqhubekayo yetekhnoloji yokunyibilikisa i-aluminium kunye nokuvela kwenkqubo yokuvelisa, iintlobo kunye nezinto zokwenza ipleyiti yealuminiyam iya kuba ngakumbi nangakumbi, kwaye iya kudlala indima ebalulekileyo kumashishini ngakumbi.
ixabiso lealuminium, Lixabiso Aluminium Sheets, Iphepha lealuminium lama-7050, Iphepha leAluminiyam elenziwa ngombala, aluminium ingxubevange 6061 ixabiso, Iphepha lePlread Aluminium Sheets,